कोरोनाको जोखिममा कलेजोका बिरामी [भिडियो]
२०७७ बैशाख २२ सोमबार ०६:००:०० प्रकाशित
मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंगमध्ये कलेजो एक हो। शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न कलेजोले धेरै काम गर्नुपर्छ।
विभिन्न रोगसँगै केही यस्ता भाइरसहरु छन्, जसले कलेजोलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्छ। जस्तै, डिएनए, आरएनए जस्ता भाइरसले कलेजो बिगार्छ। त्यसैले अहिले महामारीको रुपमा लिएको कोभिड १९ ले कलेजोका बिरामीलाई बढी असर गर्ने देखिएको छ।
कलेजोमा समस्या भएका बिरामी र त्यही दीर्घकालीन समस्या भएका व्यक्तिमा कोरोनाको असर बढी हुने गरेको पाइएको छ। किनभने कलेजोमा समस्या भएका मानिसमा अन्य व्यक्तिको तुलनामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। त्यसैले उनीहरुमा कोरोनाको संक्रमण छिटो हुने संभावना धेरै हुन्छ। यतिसम्म की उनीहरुलाई संक्रमण भए आईसियुमै राख्नुपर्ने र भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
लकडाउनको यो समयमा कलेजोका बिरामीलाई हामी अस्पताल आउन सुझाव दिदैनौ। कुनै इमरेन्सी भएको अवस्थामा मात्र अस्पताल आउन हामी सुझाव दिन्छौ। नभए सकेसम्म फोनबाट चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
बिचमै औषधि खान छुटाए के हुन्छ ?
कलेजोको समस्या भएर उपचारमा रहने बिरामी विशेषगरी दुई समूहका हुन्छन्। एक्युट भाइरल हेपाटाइटिस भएका अधिकांश बिरामी औषधि खाएपछि निको हुन्छन्। तर कोर्निक हेपाटाइटिस बी र सी भएका बिरामीले निरन्तर औषधि खानुपर्छ।
सबै बिरामीले मासिक रुपमा औषधि खरिद गरेर खाने गर्छन्। तर अहिलेको लकडाउनमा धेरैजसो बिरामीले हेपाटाइटिस बी को औषधि छोड्नु परेको अवस्था छ। ६ महिना या एक दुई वर्षसम्म निरन्तर खानुपर्ने औषधि बिचमै छुटेपछि पुनः सुरु देखि औषधि खानुपर्ने बाध्यता छ।
दोस्रो हो, कलेजोको दीर्घकालीन रोग। यो समस्या भएका बिरामीलाई विभिन्न समयमा हामीले पिसाब बढाउने औषधि, ग्याष्ट्रिकको औषधि र कलेजो बलियो बनाउन हामीले भिटामिन दिन्छौ। ती औषधिहरु पनि छोड्दा त्यसले शरीरमा नराम्रो असर गर्छ। यी औषधि छुट्दा रक्तश्राव भएर, दिसा कालो भएर, मुखबाट रगत बान्ता गरेर आउने बिरामी पनि छन्।
हेपाटाइटिस ए र ई कस्तो समस्या हो ?
पानी तथा खानाबाट सर्ने र रगतबाट सर्ने हेपाटाइटिस गरी यो दुई किसिमका हुन्छन्। एउटाले दीर्घकालीन रुप लिन सक्छ भने अर्को महामारीको रुप लिन सक्ने हुन्छ। हेपाटाइटिस ए र ई बढी घातक मानिन्छ।
नेपालमा पनि हेपाटाइटिसले प्रकोपको रुप लिएको छ। नेपालमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य निकायले यस विरुद्ध तयारी त गरेको छ तर त्यो पर्याप्त भने छैन। भविष्यमा यसले महामारीको रुप लिन सक्ने भएकाले सरकारले यसको पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा हरेक वर्ष असार साउन हेपाटाइटिस ए र ई को प्रकोप देखिन्छ। विशेषगरी यसले वृद्धवृद्धा र गर्भवतीलाई बढी असर गर्छ। त्यसैले सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ। फोहोर पानी पिउनु भएन र हात सफा राख्नुपर्‍यो।
हेपाटाइटिस जनस्वास्थ्य समस्या हो। त्यसैले एचआईभी एड्स लाई जनस्वास्थ्यको रुपमा हेरे जस्तै हेपाटाइटिसलाई पनि जनस्वास्थ्यको रुपमा हेरे प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छौ।
प्रदुषित पानी तथा खानाबाट हेपाटाइटिस ई सर्छ। त्यसैले सर्वसाधारणले पानी उमालेर र सफा खाना मात्र खानुपर्‍यो। अनि हातको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही सूचनालाई जनसमुदाय स्तरमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ। यो वर्षेनी बर्खायामको समयमा देखिने भएकाले आवश्यक मात्रा किटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। समयमै यसको निदान हुन सक्यो भने हामीले हेपाटाइटिसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ।
हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिनको महत्व
हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन (खोप) ले क्यान्सरलाई रोकथाम गर्छ। हेपाटाइटिसले अन्तिममा कलेजोको क्यान्सर गरउँछ। त्यही क्यान्सरबाट बचाउन हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिनको आवश्यक पर्छ। यो भ्याक्सिन लगाएपछि हेपाटाइटिस बी को संक्रमण हुँदैन।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको इपीआई सेड्युल अनुसार नेपालमा सन् २००३ पछि जन्मेका बच्चाहरुमा यो पेन्टाभालिन भ्याक्सिन लगाएको छ। तर हाम्रो समयमा यो भ्याक्सिन लगाउने चलन थिएन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मी, ४० उमेर कटेका व्यक्ति, क्रोनिक रोग भएका बिरामीलाई यो भ्याक्सिन लगाउन हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्दै आएका छौ। यो स्वास्थ्य नीतिमै आउन आवयश्यक छ।
हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन सरकारले लगाउँदै आएपनि हेपाटाइटिस ए निशुल्क छैन। बजारमा भने उपलब्ध छ। तर हामीले हेपाटाइटिस ए लाई भन्दा बी लाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ।
लिभर सिरोसिस भनेको के हो ?
कलेजोमा विभिन्न कारणले हुने समस्याको अन्तिम अवस्था हो। अर्थात् हेपाटाइटिस, मादक पदार्थको अत्यधिक सेवन, मोटोपना या अन्य विभिन्न रोगका कारण कलेजोमा असर गर्छ। यी सबले कलेजो जुन किसिमले नरम हुनुपर्ने हो, त्यसो हुँदैन। त्यसमा छिया छिया पर्दै कलेजो कडा हुन थाल्छ। जुन आकारमा कलेजो हुनुपर्ने हो, त्यो नभएपछि यसले काम गर्न छोड्छ, यसैलाई हामी लिभर सिरोसिस भन्छौ।
लिभर सिरोसिसको प्रमुख कारण भनेको मादक पदार्थको अत्यधिक सेवन हो। दोस्रो क्रोनिक हेपाटाइटिस र तेस्रो भनेको अटोइम्युन डिजिज पर्छ। पछिल्लो समय मधुमेह र अत्यधिक मोटोपना भएका मानिसमा पनि यो समस्या देखिएको छ। कसैको जन्मजात पनि समस्या हुन सक्छ।
यो समस्या आउन नदिन माथि उल्लेखित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र समय–समयमा कलेजोको परीक्षण गराउन अति नै आवश्यक छ। त्यसैले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ।
कलेजो ७५ प्रतिशतसम्म बिग्रदा पनि यसले मुख्य रुपमा लक्षण देखाउँदैन। त्यो समयसम्म पनि बिरामीले थाहा नपाएर मादक पदार्थको सेवन गरिरहेको हुन्छ। तर यो अवस्थामा हामीले अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेर्‍यौ भने कलेजा कडा हुन थालेको थाहा पाउन सक्छौ।
धेरैजसोमा लक्षण देखिदैन। तर जब लक्षण देखिन्छ, त्यो बेलासम्म निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यो समय बिरामीमा आँखा पहेलो हुने, गोडा सुनिन थाल्ने, शरीर चिलाउने, खाना अरुचि हुने, थकाई लाग्ने लक्षण देखिन्छ।
कलेजोको सबै उपचार नेपालमा संभव छ ?
कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा नेपालमा सुरु भइसकेको छ। भक्तपुरको शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सुविधा छ। कलेजोमा गरिने उपचार भनेको औषधि, हेपाटाइटिस विरुद्धको औषधि, फ्याटी लिभर, अटो इम्युन लिभर डिजिज विरुद्धको औषधि सबै छ र नेपालमा यी सबैको उपचार संभव छ।
कलेजो कसरी स्वथ्य राख्ने ?
मादक पदार्थको सेवन पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने। यदी कसैको कलेजोमा समस्या छ भने यसको एक थोपाले पनि कलेजोलाई धेरै हानी गर्छ। जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्ने।
तौललाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। ताजा फलफूल र तरकारी खानुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र कलेजोलाई हानी गर्ने कुराहरुबाट हामी टाढा रहन सक्यौ भने कलेजो पनि स्वस्थ रहन्छ।
(डा दिलिप शर्मा कलेजो रोग विशेषज्ञ हुन्। )